RN2 | GAZETY_ADALADALA
Loza namoizana aina 6 teny amin’ny RN 2
Posted on 21/02/2011 by gazetyavylavitra
Fiarabe (camion) iray no nahavanona ny lozam-pifamoivoizana. Maharary aminay fianakaviana ny mamoy havana. Satria isan’ny fianakavianay ireo nafoy. Nafoy noho ny tsy fitandreman’ny hafa, nafoy tao anatin’ny indray mipi-paso, nafoy tsy nisy ala nenina azo natao.
Ny fahoriana ho zaka ihany, hoy ny fiteny. Fa ny tena nahavaky fo sy nahatezitra dia ny naheno fa tonga tao amin’ny fianakaviana tratry ny manjo ny solontenan’ilay mpamily (fa tsy izy tenany), nitondra vola 2.000.000Fmg ho onitra, hono. Tena fanaovana z’inona ny fianakaviana miharitra ny mnafy izany. No sady fanaovana ny fatin’ny havana ho toy ny fatin’alika sanatria.
Raha tsy hiraharaha ireo aina nafoy ilay mpamily, ny tompon’ny fiara, sy izay rehetra manodidina azy, ndeha hataontsika any amin’ny zavatra simba ny fomba fijery. Tsy sanatria matim-bola akory ny fianakaviana raha miteny an’ity: rehefa tsy hijery ny aina ry zareo, moa ve maha onitra ny vidin-javatra simba (ara-materialy) ilay vola 2.000.000Fmg narangarangany? Mbola manana be lavitra noho izay aza ny fianakaviana raha izay no tiany ho fantatra.
Nivoady moa ny zanaky ny maty fa na ho tonga hatraiza ity raharaha ity, na ho tonga hatraiza, dia hitory sy hanaraka hatramin’ny farany an’izay rehetra voasaringotra amin’zany izy ireo.
Raha tsiahivina ny tantara dia avy nanatrika lanonam-pifamofoana tany Ambohimalaza ireto namoy aina ireto, no nijanona naka sasiny teo amina parking an’ny toeram-pivarotana iray mba hiandry ireo sasany mbola taraiky tany aoriany, no nisy fiarabe iray nandeha mafy, niala fiara iray hafa 2CV nijanona amin’ny tsy tokony hijanonany, ka najary natao ankalana ho an’ilay fiarabe, sanatrian’ny vava. Raiamandreny iray, zanany vcay roa miaraka amin’ny vadiny avy, ary ny mpamily no namoy aina, raha mbola miatrika ny mafy any amin’ny toeram-pitsaboana kosa ny sisam-paty.
Tsy vao izao ne efa nahalalàna ny tsy firaharahiana ataon’ireny fiarabe sy Taxi-brousse ireny eny amin’ireo lalam-pirenena mivoaka an’Antananarivo. Toa azy samirery ny làlana. Firifiry moa ireo fiara madinika rehefa sendra mahita ireny fiarabe ireny tonga avy aoriany ao no misafidy ny hikisaka haka sisinyhaingana sy mijanona tanteraka mba hanomezana làalan itony fiaraben’ny fahafatesana itony?
Manantena ny fianakaviana fa tsy ho matimaty foana ary tsy hisy indray koa ny hanelanelana amin’izao zavatra izao. Efa vonona rahateo hitondra ny raharaha hatrany amin’ny farany tratrany izy .
Mandria am-piadanana RATSIFANDRIHAMANANA Ravoniandro Iharisolo
Filed under: anao ny fitenenana, fiaraha-monina, tapatapany | Tagged: 2CV, lozam-pifamoivoizana, Ratsifandrihamanana, RN2 |	Leave a comment »